sakay mafana alika anaty kapoaka
ny vata fampangatsiahana voasarimakirana ve no ampangatsiahinao?
namboarina brie miaraka amin'ny cranberry sy pecan
inona no ao amin'ireo akora lasa goo lany
Tuna Noodle Casserole dia ankafizin'ny fianakaviana hatramin'ny ela! Ny Tuna dia atsipy amin'ny paty atody, voanjo ary lasopy holatra avy eo amboarina miaraka amin'ny fonon-javatra.
Ity no casserole tiako indrindra! Cracker Barrel Hashbrown Casserole dia mila prep 5 minitra fotsiny ary tena maneso, matsiro ary tsy mahatohitra tanteraka! Ity dia casserole sakafo maraina tonga lafatra ho an'ny rehefa miaraka amina vondrona miaraka amin'ny sakafo maraina na sakafo maraina matsiro ianao.
Resipeo hena mora
Ity recette meatball mora ity no andehanako! Ny legioma dia mivoaka mamy isaky ny avy, mety tsara ho an'ny potlucks sy fety, na eo ambonin'ny spaghetti!
Ny Chicken Rice Casserole dia sakafo ankafizin'ny fianakaviana voaomana ao anatin'ny 5 minitra miaraka amin'ny akora 4 fotsiny, mamon-tsiro be dia be izy io amin'ny famenoana sakafo lovia iray!
Jalapeno Poppers dia feno feno fromazy feno menaka feno famonoana ary apetaka takelaka Panko mofomamy ary endasina mandra-pahatongan'ny volamena sy bubbly!
Baked Ham miaraka amin'ny Sugar Sugar Glaze
Baked ham dia iray amin'ireo sakafo fialantsasatra ankafizinay! Malemilemy izy io ao anatiny ary ny any ivelany kosa borosin-tsiranoka siramamy volontsôkôlà ary atao caramel ho an'ny mamy.
Salady Pasta Italiana
Ny salady paty italianina dia vita amin'ny legioma, fromazy, salamy ary vinaigrette vaovao iray izay atsipy miaraka amin'ny paty tianao indrindra mba hamoronana lovia tonga lafatra ho an'ny potluck rehetra.
Tono akoho mora nono
Tsy misy mora na mahasalama kokoa noho ny tratra akoho voatono. Ny tratran'ny akoho malemilemy sy marefo dia voadoboka amin'ny fahalavorariana volamena!
Endasina Fries (Oven Fries)
Ataoko mandritra ny fotoana rehetra ireto lafarinina marefo ireto! Ny zanako dia tia azy ireo mihoatra noho ny novidian'ny magazay ny fries ary ireo dia tena tsara lavitra ho azy ireo!
Dr. Pepper Crock Pot Nisarika Resipe Pork
Mora sy matsiro tokoa ny fomba fahandro Slow Cooker Pulled Pork miaraka amin'ny Dr Pepper! Afaka misolo labiera faka na kongona ianao, ary mahavariana ity henan-kisoa voasintona ity!
Fomba fahandro ny kisoa Tenderloin
Ity Pork Tenderloin ity dia mivoaka malefaka sy be ranony, tonga lafatra isaky ny mandeha! Miomana haingana, ity fomba fahandro mora ity dia tsara ho an'ny sakafo mandritra ny herinandro izay tian'ny olona rehetra.
Ovy nendy indroa
Ovy Baked Roa no azo antoka fa ankafizin'ny fianakaviana! Akorandriaka voatono nopetahany ovy nopotsehina malefaka, krema marikivy, fromazy, bacon ary sakay!
Sakafon'ny kisoa voaendy
Ny henan-kisoa voaendy dia namboarina, namboarina ary namboarina ho an'ny sakafo matsiro sy malefaka tonga lafatra! Mofomamy amin'ny mari-pana isan-karazany dia tsara amin'ny lafiny rehetra.
Voaloboka Cornish Hen
Voahandro Cornish Hen dia voahandro tsara, avy eo nopetahany ovy, tongolo, ary karaoty mandra-pahavaratra sy malefaka!
Ny piccata akoho dia misy tratran'akoho nopotsehina tao anaty satroka matsiro sy saosy divay fotsy natolotra tamin'ny vary na ovy nopotsehina.
Tsy misy na inona na inona milaza rehefa misasakalina isan-kerinandro na fisakafoanana hariva mora toy ny taolan-tehezana Crock Pot. Ny tadin'i Crock Pot BBQ dia ankafizin'ny fianakaviana foana!
Resipeo Coleslaw mahazatra
Io fomba fahandro mora coleslaw io no tena tianao! Masiaka, be zesta ary mangatsiaka .. ity fomba fahandro coleslaw ity dia mahatonga ny lafiny mety indrindra ho an'ny BBQ na an-tampon'ny sandwich!
Smothered Crock Pot Pork Chops dia iray amin'ireo sakafo ririnina tiako indrindra! Fiomanana minitra vitsy monja ho an'ny henan-kisoa mahandro matsiro sy malefaka.
Beef Stroganoff dia fomba fahandro mahazatra miaraka amina henan'omby sy holatra malefaka ao anaty gravy marikivy manankarena. Arosonay amin'ny paty atody ho an'ny sakafo feno izany.
Fajitas akoho mora
Ireo sakafo mora sy mahasalama ireo Chicken Fajitas! Ny marinade fajita mora dia atsipy akoho, poivra sy tongolo ary apetaka ambony anaty tortillas malefaka.